Ividiyo eshaqisayo ikhombisa konke ukuzamazama komhlaba kusukela ngo-2001 | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Eminyakeni eyi-15 eyedlule umuntu ubephila esinye sezinyathelo ezibuhlungu kakhulu emlandweni wakhe. Iplanethi isebenza kakhulu kangangokuthi idala uchungechunge lwezehlakalo zemvelo ezibulale izigidi zabantu kusukela ngo-2001. Ama-tsunami, izivunguvungu, isomiso, nazo zonke izinhlobo zezimo zibeke futhi zaqhubeka ukuhlola amandla okuguquguquka Ubuntu.
Uma sikhuluma ngokuzamazama komhlaba, le vidiyo ehlaba umxhwele eyenziwe yiTsunami Warning Center yePacific yaseMelika lapho ikhonjiswa khona konke ukuzamazama komhlaba okwenzeke eMhlabeni eminyakeni eyi-15 edlule.
Kuvidiyo ukuqina kokuzamazama komhlaba kuboniswa njengokukhanya kwemibala ehlukene, okunamandla kakhulu njengabamele lokho kuzamazama komhlaba okwakunamandla. Njengoba ukwazi ukubona, cishe asikho isifunda lapho ukuzamazama komhlaba kungakaze kubhalwe khona, kepha okukhulu kakhulu kwenzeka kulokho okwaziwa ngokuthi yi-Pacific Ring of Fire.
Le ndawo idlulela ngaphezu kuka-40.000km, kusukela ogwini olusempumalanga ye-Asia nase-Australia, kuya ogwini olusentshonalanga yamazwe aseMelika. Cishe ama-90% wokuzamazama komhlaba emhlabeni wonke kwenzeka kulezi zifunda ngenxa yokuhamba kwamapuleti etektoni.
Kepha lokhu akusho ukuthi ukuzamazama komhlaba akwenzeki kwezinye izingxenye zomhlaba. Eqinisweni, amazwekazi ahlala enyakaza ngenxa yamapuleti. Okwenzekayo yilokho ezinye zezindawo ezibaluleke kakhulu ezithathwa ngaphansi kwePacific Ring of Fire. Ngalesi sizathu, ngezikhathi ezithile sithola izindaba zokuzamazama komhlaba okwenzeke ezweni elifakiwe kule Ndandatho.
Njengoba sazi, ukuzamazama komhlaba kuyingxenye yeplanethi. Akukho okunye esingakwenza ngaphandle kokuzivumelanisa nezimo ngangokunokwenzeka nokuvimbela ukufa okuqhubekayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukwahlukanisa » Ividiyo eshaqisayo ikhombisa konke ukuzamazama komhlaba kweminyaka eyi-15 edlule